सिलामका फाइदा के के छन् त जानौ?? – साँचो खबर
सिलामका फाइदा के के छन् त जानौ??
कृषि तथा पशुपालन समाज
एक ताका इलामको सिलाम भनेपछि सबैको मुख रसाउँथ्यो । सिलाम अर्थात् तिरकुलो बहुआयामिक, बहुमूल्य जडी हो । सिलामको बोट तथा फल एकदम बास्नादार हुन्छ ।
दाना सेता वा काला दुवै किसिमका हुन्छन् । यो एक फूल फुल्ने किसिमको बिरुवा हो । यसको बोटका टुप्पोमा साना आकारमा खाली ठाउँ हुन्छ त्यसैमा फल लाग्छ ।
पाकेपछि त्यसलाई झारेर सफा गरेर अनि भुटेर खाने गरिन्छ । सिलामलाई रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भएको जडी पनि मानिन्छ । यसले शरीरको इम्युनिटी (पाचनशक्ति) बढाउन धेरै मद्दत पुर्‍याउने हुँदा महामारीजन्य अवस्थामा यसको झन् ठूलो महत्व छ ।
सिलामलाई मुख्यतः अचार र तेलहनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि यसका धेरै परिकार बनाउन सकिन्छ । सिलामको फलमात्र हैन, पात पनि स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त राम्रो मानिएको छ ।
नेपाली सिलाम क्षेत्रीय बजारमा निकै लोकप्रिय छ । तर यसले व्यावसायिकता हासिल गर्न सकेको छैन । सुगन्धित वनस्पति सिलामको अङ्ग्रेजी वा वैज्ञानिक नाम ‘पेरिल्ला’ हो । यो ‘मिन्ट’ परिवारको ‘नेपटियोडी’ वर्गमा पर्दछ । यसबाट तेल निकाल्ने वा अचार बनाउने मात्र नभई विभिन्न काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसको कलिलो पातलाई खानाको परिकारहरूसँग मिलाएर खाँदा शरीरमा चाहिने गुणकारी तत्वहरू पाइन्छ । कोरिया, जापान, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्समा यसको परिकारलाई अभिन्न अङ्गको रूपमा उपभोग गरिन्छ ।
वन सिलामलाई तुलसीझार अथवा वन तुलसी पनि भनिन्छ । यसको बोटबाट पीरो गन्ध आउने भएकोले गाईवस्तुले खाँदैनन् ।
नियमित सिलाम खाँदा हाम्रो शरीरको कोलस्टोर लेबल सन्तुलनमा आउँछ । क्यासरजस्तो भयानक रोग रोकथामका लागि पनि सिलाम उपयोगी जडी हो । मुटु सम्बन्धी समस्या निदानका लागि पनि सिलाम उपयोगी मानिएको छ ।
एलर्जी हुने समस्या भएकालाई, मुख स्वास्थ्यका लागि, दमको समस्या हुनेले सिलाम खानु अत्यन्त राम्रो मानिएको छ । जाडो समयमा सिलाम खाँदा शरीरलाई तातो बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । छाला सम्बन्धी समस्या हुनेले पनि नियमित सिलाम खाँदा राम्रो हुन्छ ।
मस्तिष्कको लागि पनि सिलाम अत्यन्त फाइदाजनक छ । तनावलाई कम गर्न नियमित सिलाम खाँदा राम्रो मानिन्छ । सङ्क्रमण रोक्न पनि सिलाम राम्रो दबाइ मानिन्छ ।
जिउका जोर्नीहरू दुख्ने समस्यालाई निदान गर्न सिलाम उत्तम मानिन्छ । घामले डढ्ने समस्यालाई हेरचाह गर्न मद्दत पु¥याउन पनि सिलाम राम्रो छ ।
शरीर सुनिने समस्या भएकाहरूका लागि पनि सिलाम उत्तम दबाइ हो ।
कोरिया र जापानमा सिलामको पातको अचार, सलाद, किम्ची, रोल्स, भुटेको परिकार बनाउने परम्परा छ । म्याक्सिकोमा सिलामको पात प्रयोग गरेर चिमीचुरी बनाइन्छ भने भारतमा पकोरा पनि त्यत्तिकै प्रसिद्ध छ ।
नेपालमा सिलामको छोप हालेर अचार बनाउने चलन निकै पुरानै हो तर आधुनिक र व्यावसायिक हिसाबले भने अब धेरै परिकार बनाउन थालिएको छ । सिलामको सुप अहिले निकै प्रसिद्ध मानिन्छ । सिलामको धुलो या गेडा प्रयोग गरेर सलाद बनाउने चलन पनि आएको छ । सिलाम मिसाएर कुकिज बनाउँदा निकै स्वादिलो हुन्छ ।
सिलामको तेल विभिन्न आयुर्वेदिक ओखती बनाउन र मसाज गर्न उत्तम हुन्छ । यसको तेल कपालमा लगाउन पनि मिल्छ । नेपालमा अचार तथा सिलम र चामल मिलाएर खान मात्र प्रयोग गरेको पाउँछौँ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सिलामको बढी महत्व भएको पाइन्छ । विकसित देशहरूमा यसलाई विशुद्ध अर्गानिक खाने तेल तथा सुन्दरताका लागि प्रयोग गरिने विशेष तेलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।
यस्ता बहुउपयोगी सिलामको व्यवस्थित खेती गर्न सके कृषिको विकास र स्वरोजगार निर्माणमा महìवपूर्ण योगदान पुग्ने निश्चित छ ।
Previous: अकबरे बाट कोहि किसान मालामाल ,कतै रोगको संक्रमण
Next: पौडेललाई दाहाल-नेपालको आग्रह :देउवाले ओलीसँग मिलेर कुनै पनि कदम चाल्न सक्ने भन्दै निगरानी राख्नुहोस